Posted by pandora at 10:40 PM
And there is nothig."
An amazing & visible poem I ever look through!!!
June 2, 2007 at 10:56 PM
အင်း ကိုနတ္ထိ (ခေါ်) Nothing က ဒီနေရာမှာ ကွန်မန့်ပေးထားတော့လည်း ပန်ဒိုရာ လှည့်စားသလို မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီပို့စ်လေး ထားလိုက်ပါမယ်။
June 2, 2007 at 11:53 PM
Seeing your " Look! " post, I really feel happy.
June 3, 2007 at 8:18 AM
If there is nothing, it should be nothing. Instead, you wrote 'and there is nothing'.
That's why that statement is unlogical.
ဘာမှမရှိတဲ့အရာဆိုတာ ဘာမှကိုမရှိတာပါ. မရှိပါဘူးလို့ သက်သေပြနေရင် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်. ဘာမှမရှိတဲ့အရာဆိုတာ ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ နှုင်းရသတ္တိအရ ဖြစ်လာတာ. ဒါကြောင့် သူ့မှာ ဘာမှကို ရှိမနေသင့်ဘူး.
ကြည့်ပြီးမှ ကွန်မန့်ဖတ်လိုက်တော့ .. ပန်ပန့်လှည့်ကွက်ထဲ တည့်တည့်တိုးသွားတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တိုးရကျိုးတော့ နပ်ပါတယ်။ ဘာမှ မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ ဘာမှ မရှိဘူး ဆိုတာကြီးက ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ … ကိုရန်လေး ပြောသလို ဘာမှ မရှိရင် ပိုကောင်းမလားပဲ။
ကိုစိုးထက် U happy I happy lah.. (Singlish)
ရန်.. မမေ.. ဘာလို့မရှိရမလဲ ထိပ်ဆုံးမှာ ကို Nothing ကြီး ငုတ်တုပ်လေ..ဟတ် ..
ဟွမ်…Nothingကြီး ငုတ်တုတ်နဲ့တောင် တွေ့နေသေးတယ်။ ငုတ်တုတ်မဟုတ်လို့ အိုးပုတ် ဂျိုးရုပ် ပလုပ်တုတ် ဖြစ်နေမလားဗျ။
Look! see below ဆိုကတည်းက ထင်တော့ ထင်သားပဲ၊ ဒါပေမယ့် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကို ကြည့်လိုက်သေးတယ်။
ဒေါ်ပန် ကြည့်စမ်း လူတွေကို ၂-နှစ်ကျော်ထိ ကြည့်ခိုင်းတုံး။
နောက်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက် လာကြည့်ဦးမယ်မသိ။ :D